IJablonec nad Jizerou (Jablonetz an der Iser ngesiJalimane) itholakala esifundeni saseSemily esifundeni saseLeberec. Kuhlala izakhamuzi ezingaba ngu-1. Njengoba iJablonec nad Nisou iseduze, endaweni yabahamba ngezinyawo ibanga elingama-600 km kuphela, izibonakaliso zaseCzech Jablonec noma zeJabloneček ngezinye izikhathi zazisetshenziswa. Igama elithi Jablonec nad Jizerou belisetshenziswa ngokusemthethweni ngalo masipala kusukela ngo-21,9.
Ekuhlukaniseni ifa phakathi kweNkosi Lord of Waldstein, Hynek of Gylemnicze (Jilemnice fortress) no Henyka of Sstiepanicz (Štěpanice), ngoJuni 22, 1492, uHynek waseWaldtsstein noGylemnicze wakuthola, phakathi kwezinye izinto, impahla emsebenzini wakhe. idolobhana laseGablonecz nezinkantolo zezindawo zokubhukuda, abampofu, ngeholo nedolobhana laseWogtiessycze (Vojtěšice).
UFranz Joseph Ngithathe isinqumo sokuphakamisela uJablonec elokishini ngoFebhuwari 14, 1896, okwakumenyezelwe ukuthi ngoFebhuwari 24, 1896, kanye nelungelo, hhayi kusukela ngoJuni 7, 1896, kodwa kusukela ngoJulayi 7, 1896, wanikeza uJablonec ijazi lezingalo ISt Procopius esitayeleni noDeveli ochungechungeni olungakwesokudla kanye ne-abbot crutch ngakwesokunxele ibekwe ku-cartouche ngaphansi kombhalo we-WESS IABLONETZ. Izibalo ezijwayelekile zejazi lezandla leJablonec lifaka isihlahla se-apula, udonga, isonto, isikebhe kanye nebhuloho.
Ngomyalo woMnyango Wezangaphakathi wangomhla zingama-26 kuNtulikazi 1916, inombolo 26.087, ngesicelo somkhandlu kamasipala wengeza igama lomasipala wendawo weJablonec kuJablonec nad Jizerou futhi ngesiJalimane ukusuka eJablonetz kuya eJablonetz an der Iser.
Ngo-1971, uJablonec nad Jizerou waphakanyiswa ngokungaqondile edolobheni ngokunikeza ikomidi likazwelonke laleli dolobhana.
Indawo yaseKamenec ski enamakhilomitha ayi-688 yemithambeka eqhweni nezindawo ezimbili eziphakeme ngokushushuluza nayo itholakala engxenyeni yeJablonec edolobhaneni laseTříč emthambekeni weHrubá Strana Three Hills (isiqongo se-3,3 m).
Jablonec nad Jizerou ukudutshulwa kwendiza ski resort Ukushushuluza iqhwa kusuka Above ebusika
Amathegi: Jablonec nad Jizerou ukudutshulwa kwendiza ski resort Ukushushuluza iqhwa kusuka Above ebusika
Indawo: UJablonec nad Jizerou, Czech Republic